Uyenza njani isibane seoyile kunye neorenji- Ikkaro
yokuqalisa >> Iingcaphephe zaseKhaya >> Uyenza njani isibane seoyile kwiorenji
Uyenza njani isibane seoyile kwiorenji
Le yinto umhlobo andifundise yona kwakudala, Ngeorenji kunye neoyile encinci esinako sifumane esethu isibane seoyile kwimizuzu embalwa.
Kuyinyani ukuba ayisebenzi ukusikhanyisela, kodwa ijongeka intle njengomhlobiso ebusuku. Ukuba unesidlo sangokuhlwa sothando okanye ukuba uyafuna bonisa umdla ngexesha lesidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa nabahlobo okanye usapho.
Ukwenza isibane sethu, siya kufuna kuphela izinto ezilandelayo. Iorenji kunye neoyile encinci, ndizithathile ezinye kwaye bezisele zisetyenziselwa ukupheka. Le yindlela esenza ngayo isebenze kwakhona ;-)
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukususa ulusu kwi iorandi Ukwahlulahlula kwiihafu ezi-2. Ngenxa yoko, simakisha ngemela kwaye sahlulahlula ngomnwe, kwividiyo ijongeka ngcono kakhulu.
Elona candelo lisithandayo kakhulu ngumsila, esiya kuwusebenzisa njengomsonto. Kufuneka sisuse eli candelo ngononophelo ukuze lingophuli kwaye ioyile ilahleke kamva.
Ngale nto usebenza ugqibile isibane. Kufuneka sigalele ioyile ngaphakathi siqiniseke ukuba "umsonto" wethu ufakwe kakuhle kwioyile.
Kodwa uya kubona yonke into icace gca kwividiyo. Ukuba awusilandeli, rhuma Ndifuna ukuqala ukuthumela ividiyo yeveki
Apha ndishiya ezinye iifoto zeorenji. Isetyenziswe njenge ikhandlela, isibane okanye isibane
izigaba Iingcaphephe zaseKhaya Ukuhamba kwetikiti
Amavili angenawo umoya okanye angenamoya womoya
Tabby. Yakha imoto yakho yoMthombo ovulekileyo we-DIY
Izimvo eziyi-9 ku "Uyenza njani isibane seoyile ngeorenji"
IGAYAYI YETYHALA !!
Matshi 12, 2014 kwi2: 57 am
kulungile kwaye kungokwemvelo
EyoKwindla 15, 2014 ngexesha 10:13 pm
ummm, kodwa loo nto itangerine, hayi iorenji ummm
UCanzibe 20, 2014 nge-8: 09 pm
Kumnandi kunye nevumba lale sitrasi sisityebi kufuneka sive
Julayi 1, 2014 kwi-6: 53 pm
Agasti 3, 2014 kwi-11: 50 pm
molo, ndizifumana zipholile, kulula ukuzenza kwiprojekthi yesikolo. Kodwa ndifuna ukwazi ukuba ndingasebenzisa olunye uhlobo lweziqhamo. Enkosi.
Agasti 5, 2014 kwi-10: 49 pm
Ewe, inye kuphela into eyenza iorenji ibaluleke kukuba sinokusebenzisa umsila oshiyekileyo njengomsonto. Andazi ukuba ukongeza kwi-citrus unaso nasiphi na esinye isiqhamo esinezi mpawu. Ukuba uzama enye kwaye isebenza kakuhle, nceda usazise.
Agasti 8, 2015 kwi-12: 50 am
Iorenji ilungile ayonakalisi i-ecosystem